Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493729 times)
« Reply #970 on: March 06, 2013, 08:14:42 AM »
[ ချစ်သောဇနီး ] ...............
... ဒါပေမယ့် သူ အီးမေးလ်လိပ်စာ မှားရေးလိုက်တာကို သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘူး။
« Reply #971 on: March 06, 2013, 08:16:31 AM »
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စက်မှု ကောလိပ်မှ ကျောင်းပြီး သွားကြသည်...
တစ်ယောက်က အကြံအစည် တစ်ခုရပြီး စက်တစ်မျိုးကို တည်ထွင်လိုက်သည်....
ထိုစက်မှာ.... အမေရီကန် ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာ ထည့်တိုင်း လှ ပချောမော သော အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ထုတ်ပေးသည်။ သူ၏စက်အလွန်ရောင်းကောင်းသည်... အနယ်နယ် အရပ် ရပ် မှ မှာယူကြသည်... သိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ သူ ဒေါ်လာ တစ်သန်းခန့် ရပြီး သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်သွားသည်.....တစ်နေ့ လမ်းတွင် .... သူငယ်ချင်းဟောင်းနှင့် ပြန်တွေ့ သည်...
" ဟာ ဟိတ်ကောင် မင်းကြည့်ရတာ တယ်ဟုတ်ပါလား.. ငါ့ထက်တောင် သားနားနေသေးတယ်"
" ဟုတ်တယ်.. မင်းက သန်းကြွယ် သူဌေးပဲရှိသေးတယ်... ငါတော့ ခု ဘီလီယျံနာ ဖြစ်နေပြီ"
" တယ်ဟုတ်ပါလားကွ.. မင်းဘာတွေများတည်ထွင်လိုက်သလဲ"
" စက်တစ်လုံးတည်ထွင်လိုက်တယ်လေ..... ငါ့စက်က မိန်းမတစ်ယောက်ထည့်လိုက်တိုင်း ထည့်လိုက်တိုင်း အမေရီကန်ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာ ပြန်ထုတ်ပေးတယ်...... အဲဒီ စက် အတော်ရောင်းကောင်းခဲ့တယ်"
« Reply #972 on: March 06, 2013, 08:17:51 AM »
• ဂျုံမှုန့်သန့်သန့်တပိဿာကိုယူပြီး ဒူးကိုကွေးလိုက်ပါ
« Reply #973 on: March 06, 2013, 08:18:40 AM »
၁၃ ထပ်တွင်ရှိသော ရုံးခန်းတွင် မောင်ထုံ ထိုင်နေသည်။
ထိုအချိန်တွင် လူတစ်ယောက် အမောတကောတက်လာပြီး အော်ပြောလိုက်သည်။
"ကိုအုန်းကြိုင်၊ ခင်ဗျားသမီးလေး ချယ်ရီ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်လို့ သေပြီဗျ။!"
« Reply #974 on: March 06, 2013, 08:20:32 AM »
« Reply #975 on: March 06, 2013, 08:22:22 AM »
ဝေဒနာသည်တစ်ဦးက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လဲပြီး သီချင်းဆိုနေခဲ့တယ်။
သီချင်းဆိုရင်းဆိုရင်း ပက်လက်လှန်ဆိုနေရာက ရုတ်တရက် မှောက်ရက်လဲပြီး ဆက်ဆိုပြန်တယ်။
ဒါကို ဆရာဝန်က မြင်တော့ "ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ဟိုလှန်ဒီလှန် လုပ်နေရတာလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။
« Reply #976 on: March 07, 2013, 11:30:12 PM »
ဖခင်ဖြစ်သူကိုကပ်ပြီး တိုးတိုးလေးမေးတယ် ။
“ဖေဖေ……sex ဆိုတာဘာလဲဟင်” တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အတော်အဖြေရခက်သွားတယ် ။
ကလေးငယ်ရဲ့သိလိုစိတ်ရှိတဲ့ စူးစမ်းမှုကိုလည်း ပိတ်ပင်ငေါက်ငမ်းပြီး မတားမြစ်ချင်ဘူး ။
တည့်တည့်ကြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်ဖို့ကလည်းကလေးငယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ညစ်ညမ်းတဲ့
မဖွယ်မရာစိတ်ကူးတွေ ၀င်သွားမှာစိုးတယ် ။ ဒါနဲ့….
sex ဆိုတာ လူသားမျိုးနွယ်တွေ ပေါက်ဖွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတခုပေါ့ကွာ ။
ဒီကိစ္စဟာဆိုရင်…… ဘာညာဘာညာနဲ့ လျှောက်သွယ်ဝိုက်ပြီး ပြောရတော့တာပေါ့ ။
ပြီးတော့မှ “ဖေဖေရှင်းပြတာ သဘောပေါက်ရဲ့လား”လို့မေးတယ် ။
ဒါနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ နောက်ထပ် ကွေ့ကာဝိုက်ကာနဲ့ ၁၅မိနစ်လောက်ကြာအောင် ထပ်ရှင်းပြတော့လည်း
ကလေးငယ်က သဘောမပေါက်ပြန်ဘူး။တတိယအကြိမ် ရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက
စိတ်မရှည်တော့ဘူး ။ တော်တော်စိတ်တိုလာပြီး..ဒါနဲ့…….
“နေစမ်းပါဦး၊ဘာဖြစ်လို့မင်းက ဒီလောက်တောင် သိချင်နေရတာလဲ”လို့ မေးလိုက်တော့
ကလေးငယ်က သူ့လက်ထဲက အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထားတဲ့ ရေကူးအသင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာကိုပြပြီး
“ဟောဒီလျှောက်လွှာထဲမှာ…Name လို့ရေးထားတဲ့ကွက်လပ်မှာ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ရေးဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကို
သိပါတယ် ။Age လို့ ရေးထားတဲ့ ကွက်လပ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်အသက်ကို ထည့်ရမယ် ဆိုတာလည်း သိတာပဲ ။
ဒါပေမယ့်Sexလို့ ရေးထားတဲ့ ကွက်လပ်မှာတော့ ဘာရေးထည့်ရမှန်း မသိလို့အဖေရ” တဲ့
ဘောင်းဘီဂွပြဲလာတဲကလေးကို သူ့အမေကရိုက်တော့ ကလေးက အမေကို ပြန်ပြောတယ်။
“အမေက ဘက်လိုက်တယ်...သားကျ ဖောင်ဘီဂွလေးတင်ပြဲတာကို ရိုက်လဲရိုက်သေး ဆူလဲဆူသေး
အစ်မ ထမီဒူးပေါ်အောင်ကွဲနေတာကြတော့ဘာမှမပြောဘူး.. အီးဟီး. ဟီ..”
ပထမလူ: အရင်ပတ်က ကျွန်တော့်မိန်းမမျက်စိထဲ သဲတစ်ပွင့်ဝင်သွားတယ်။ ဆရာဝန်သွားပြတော့
ဒုတိယလူးဟာ.. ခင်ဗျားကံကောင်းတာပေါ့။ အရင်ပတ်က ကျွန်တော့်မိန်းမမျက်စိထဲ
အနွေးထည်တစ်ထည်ဝင်သွားတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ငွေ ၃ထောင်ကုန်သွားတယ်။
« Reply #977 on: March 08, 2013, 07:59:53 AM »
လူငယ်တစ်ဦး စားသောက်ဆိုင်ထဲ ၀င်ရောက်ကာ တစ်ဦးတည်းထိုင်ပြီး ယမကာများ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်သုံးနေသဖြင့် စာပွဲထိုးက မေးလေသည်။
စာပွဲထိုး။ ။ဘာဖြစ်လို. ဒိလောက်သောက်နေရတာလဲ။
လူငယ် ။ ။စိတ်ညစ်လို.။
လူငယ် ။ ။ငါ့ အကိုက မိန်းမလျာဖြစ်နေတာ ဒိနေ.မှ တွေခဲ့ရလို.။
လူငယ် ။ ။နောက်တစ်ရက်လည်း စားသောက်ဆိုင်သို. ရောက်ရှိကာ သောက်နေပြန်သည်။
လူငယ် ။ ။ငါညီက မိန်းမလျာ ဖြစ်နေတာ ဒိနေ.သိရပြန်တယ်။
လူငယ် ။ ။နောက်တစ်ရက်လဲ စားသောက်ဆိုင်သို. ရောက်လာပြီး သောက်နေပြန်သည်။
စာပွဲထိုး။ ။ဘယ်လိုလဲ မိသားစုလူမကုန်သေးဘူးလား... ဒိနေ. ဘယ်သူကို တွေ.လာပြန်သလဲ။
လူငယ် ။ ။ငါ့ ချစ်သူပဲ...သူကမိန်းမလျာ ဖြစ်နေတာ ဒိနေ.မှ သိရတယ်။
« Reply #978 on: March 08, 2013, 08:00:54 AM »
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွန်ခုံမင်သော ခရိုနီ သူဌေးကြီးတစ်ဦးသည် ရန်ကုန်မြို.လယ်တွင်သူ၏...စလစ်နှင့်သွင်းထားသော
အဖိုးတန်ကားကြီးပေါ်မှ တံခါးဖွင့်ပြီး အဆင်းတွင် နောက်ကားတစ်စီးက ၀င်တိုက်မိရာ ယာဉ်ထိမ်းရဲ မှ အပြေးရောက်လာ၏။
သူဌေးကြီး ။ ။ငါ့ရဲ.ကားတံခါး ပျတ်စီးသွားပြီကွ။
သူဌေးကြီး ။ ။အရေးကြီးတယ်...ဒီကားကဈေးအလွန်ကြီးတဲ့ကားကွ။
ယာဉ်ထိန်းရဲ။ ။ဟုတ်ပါတယ်...အဲဒါထက်အရေးကြီးတာက အန်ကယ်ရဲ.ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက် မရှိတော့ဘူး... ကားတိုက်မိသွားတာ။
သူဌေးကြီး ။ ။ဟာ...ဟုတ်ပါရဲ...အား...နာလိုက်တာ။
ယာဉ်ထိန်းရဲ။ ။အရေးပေါ်လူနာတင်ကားကို ဖုန်းဆတ်ခေါ်ထားတယ်... အားတင်းထားပါ အန်ကယ်။
သူဌေးကြီး ။ ။ဒါထက်...ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ လက်တစ်ဖတ်မှာ ငါ့ရဲ.ရိုးလက်စ်နာရီကော ရှိသေးရဲ.လားကွ.....အား ..နာလိုက်တာ ။
ယာဉ်ထိန်းရဲ။ ။ဗျာ @@~~~
« Reply #979 on: March 08, 2013, 08:03:04 AM »
အဖေက ကျွန်တော့်ကို နိုက်ကလပ်တွေ မသွားဖို့၊
မလုံတလုံ ၀တ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးတွေ သွားမကြည့်ဖို့ အမြဲပြောတယ်။
အဲဒီလို နေရာမျိုးတွေ သွားရင် မမြင်သင့်တာတွေ မြင်တတ်တယ်လို့ အဖေ... က ပြောပါတယ်။
အဖေက မသွားနဲ့ ပြောမှ တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်သွားချင်လာမိတယ်။
တရက်မှာ အဖေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။
၀င်ဝင်ချင်းပဲ မမြင်သင့်တာကို ကျွန်တော်မြင်သွားတယ်။
.ကျွန်တော့် "အဖေ" ကိုလေ....